DAAWO VIDEO:Burco oo laga Xusin 18 May Masuulinta Dowlada oo Kali Ku Noqday Xuskii calanka Harqaan Tola La Waayey
May 18, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 2
Magaalad Burco Ayaana Laga Xisin 18 May waxaa Kaliya oo Xusay Masuulinta Maamulka Soomaliland Iyadoona Harqaan Tala La Waayey Calanka Soomaliland.
waxaa Lagu Eedeyey Gudoomiyaha Gobolka Togdheer Inuu Diidey Xuska 18 may In laga Xuso Maamulkaasio Soomaliland.
Ingiriis “kii quusiyay ee uu ka qaxay” ma tihid ee waxaad tahay kii qalabka qaarka dambe ugu xamaalay ee qulucda biyaha ugu siday eeyaahee.
Beel waliba inta ay gegi iskugu soo habar wacato way damaashaadi kartaa oo fardafuulnimada waa ba la idin kaga badiyaa. Haddii aydun idinku kala badbaaddaan waa cawo iyo caan ee sidaas ku kala amaan gala iidooroow.
Soomaalida kale ee geyigan dhaxal wadaagta ku ah weeye kuwii gaal oo dhan ba carro Soomaaliyeed ka qixiyay ee qoonsiiyay, qarannimada Soomaaliyeed na qummaati u qotomiyay. Iidoor haddii ay calanka soo dhicin lahaayeen 30 sanadood ciidda ku ma aabay jiideen. Hashii geela cuntay ee haddana cabaadkeeda laga hadhsan waayay iga dheh.
Inta ay gobnimadu ku hadhay iyo inta ay gunnimadu ku caddaatay waxay kala yihiin qolyooyinka qaran dhiska ku hawllanaa iyo qolada qaran dummiska u halgamayay, kuwa qumman ee Soomaalida wanaagga quudiya iyo kuwa qallafsan ee qoriga dabka la dhex qamaamaya.
Dawladnimada dhabta ahi sideeda ba waa hab nololeed dhammeystiran ee dad dagal mise dal wadaagaayi xadaaraddooda salka ku haysa. Shimbirkeedu waa falsafadda dadkaasi maankooda iyo laabtooda mid ka yeesha si kasta ha u kala hayb mise isir duwanaadeen ee. Hiddahooda iyo dhaqankooda ayaa u noqda rugta iyo tiirarka ay dawladnimadoodu ku dul qotonto.
Asluubtooda ayaa u noqota haybadda masiirkooda u hagta. Waddaniyaddoodu waa kalsoonida buuxda ee ay iska qabaan iyo aqoonsiga u gaarka ah ee sha’nigooda iyo aayahooda ka tarjumaya. Dadka noocaas oo kale ahi ayay dawladnimadaasu u dhalataa oo u na sugnaataa. Kol haddii ay qaar ka mid ahi u maraan siyaabo intaas oo dhan burinaya waxay noqdaan dad kala dhintay iyo dhalo kala dhalaashay.
Maalinkii ay Isaaqu tolweynaha kale xabbad iyo xumo u quudheen ayay dawladnimadoodii wadnaha ka toogteen. Iminka oo ay besteed tahay baroor miyaa wax u qaban? Arrimahaas wada muqaddaska ah ayay ahayd in ay si xasaasi ah uga taxadaraan oo u na tixgaliyaan inta aanay iidoornimu qaadin. Waa haddii ay dawladnimo dhab ah u daneynayeen.